Zvita 05, 2020
Sarudzo dzeDCC dzebato reZanu PF kuManicaland dzinonzi dzakanganiswa nekushomeka kwemapepa ekuvhotesa.
Sarudzo dzemusangano weZanu PF kuno kuManicaland dzekutsvaga vachange vari nhengo dzeDistrict Coordinating Committee, DCC, dziri kunetsa kubatanidza nekuda kwekushomeka kwemapepa ekuvhotesa, ayo anonzi mashoma.
Rimwe dambudziko rinonzi nderekuti vanhu vanotarisirwa kuvhota vari kuwandisa kupfurikidza vanotarisirwa kunge vachivhota, uye kune dzimwe nzvimbo mapepa ekuvhotesa asiri kuwanikwa.
Nzvimbo dzashanyirwa neStudio 7 dzange dzichitarisirwa kunge dzichivhoterwa nevanhu dzange dzisina vanhu vakawanda uye kune dzimwe nzvimbo kuchinzi kwange kusina zvakanyanya zvaiitika.
Dzimwe dzenzvimbo dzange dzichivhotera vanhu pasarudzo dzeDCC idzi dzinosanganisira Baring Primary School, Mutare Junior School, Chiefs’ Hall, nekumwewo.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZanu PF kuManicaland VaKenneth Saruchera vanoti vanofara nekufamba kuri kuita basa.
VaSaruchera vanoti vanotarisira kuti zvichabuda musarudzo zvinoziviswa neSvondo.
VaDaniel McKenzie Ncube, sachigaro veZanu PF kudunhu reMidlands ndivo vari kuona nemafambisirwo ari kuitwa sarudzo kuno kuManicaland. VaNcube vanoti vakatarisana nedambudziko rekuti mapepa ekuvhotesa mashoma.
"Tine dambudziko rekuti maballot papars edu mashoma saka pamwe pacho tiri kuti tiite even pakuti kune dzimwe nzvimbo tave kuvapa mapepa akaindirana sekuti toti 80 pamwe pacho 90 kana kuti 100, uye zvakare tichange tichizomuvha mamwe ma ballot papers kuendesa kudzimwe nzvimbo kuti munhu wese akwanise kuvhota."
VaMckenzie-Ncube vanoti kunyangwe hazvo chiitiko ichi chanonoka, vari kuedza napose pavanogona napo kuti zvinhu zviitwe pajekerere. Vanoti zvakare mamiriro ekunze akanganisa kufambiswa kwebasa rekuvhota nhasi.
"Parizvino tichangopedza kudeploya asi vanhu vatoenda out kuitira kuti vanhu vose vange vavhota pazuva ranhasi sekuti tiri vanhu vanoda democracy kuti vanhu vavhotere munhu wavanoda. Saka izvi ndizvo zviri kuitika nekudaro takamiririra kuti tione kuti zvinofamba seyi."
Zvichakadaro VaMackenzie-Ncube vanoti Zanu PF iri kucherechedza zvakare kuti sarudzo idzi dziitwe pasina njodzi yekuti pane vangabatwa nechirwere cheCovid 19, kuburikidza nekutevedzera zvakatarwa nevehutano.
"We know kuti tine chirwere ichi saka vanhu vedu tiri kuvaudza kuti vatevedzere zvese social distancing, face mask kupfeka uye kuita sanitise nekuti we know kuti tinacho chirwere ichi saka we are aware tiri kuita saizvozvo."
Vari kukwikwidzana pachigaro chepamusoro chedunhu reManicaland chehusachigaro vanosanganisira vaimbove murwiri wehondo yerusununguko VaIrwene Mbengo, Muzvare Cecilia Gambe, VaMparutsa naAmai Loreene Mukodza.